Kedu otu siri ike na-acha anụnụ anụnụ MTB nzọ ụkwụ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ihe ịrịba ama ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Ihe ịrịba ama ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Kedu otu siri ike na-acha anụnụ anụnụ MTB nzọ ụkwụ?
BuluSquare (n'etiti): Nke anzọ ụkwụnwere obere ịdị larịị nke steepness na ụfọdụ ngalaba ndị dị nnọọ elu, na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-eje ije haMTB. Okpuezesiri ike): Oke kachasị dị ka ọkwa etitinzọ ụkwụ, ma ogo ogo dị elu karịa nkebi nke ugwu na ịrị elu.13bọchị 13 2020
Nwanyị. (Aka ịkụ aka) - Nnọọ, ndị mara mma. Know mara ihe, mgbe izizi ị gara n’okporo igwe kwụ otu ebe, ụfọdụ ndị na-acha anụnụ anụnụ na-adịkarị, ụfọdụ na-acha ọbara ọbara na-abụkarịkwa ndị ojii na-ejighị n’aka ịkwọ ụgbọala gị, kedụ ebe ị ga-amalite? Ajuju ajuju bu, iwere ogwu bulu, i were ihe ogwu uhie? Know mara, nke ahụ bụ okwu ama ama sitere na 'The Matrix'. “Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, lelee ya, ọ mara mma.
Ọfọn, ajụjụ bụ, olee nke ị ga-ewere? Ka anyị chọpụta, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ - ((splashes) (egwu piano upbeat) Ya mere, ihe na-eme ka ụzọ ụkwụ na-acha anụnụ anụnụ, nke ọma, ụzọ ụkwụ acha anụnụ anụnụ bụ ntakịrị ụzọ nzọ ụkwụ. Onye ọ bụla na-agba ịnyịnya nwere ike ịgba ịnyịnya a na igwe kwụ otu ebe ọ bụla. Kwesighi inwe ụdị nnukwu nnukwu igwe kwụ otu ebe dị ka nke a.
Na mgbakwunye enwere otutu akụkụ ha niile jikọtara nke ọma. Thezọ ahụ n'onwe ya na-amị amị. Ihe ọ bụla nwere ike ịdaba, ihe m na-ekwu bụ na ị ga-awụli elu gị, mmiri gị na-agagharị.
Yabụ enweghị oghere ga-anwa ma j ump. Onweghi ihe ị ga-ada ma daa. Ugbu a ụdị ndị agba agba niile na-agba ịnyịnya.
Site na mbido ruo na elu. Ebe onye toro eto nwere ike iji ya kpoo ọkụ, dịka nke a, tupu ịkụtu ụzọ ka ibu, nke gnarled. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ị nwere ike inweta ọtụtụ nka na ịnya ụzọ ụkwụ ndị a n'ihi na ị nwere ike ịmụta ịmalite n'ihu ma ị nwekwara ike nweta ahụmịhe n'ịkwalite nka gị.
Ọ bụ nke ukwuu maka a-acha anụnụ anụnụ nzọ ụkwụ. Ezigbo ụzọ ezinụlọ dị ka nke a. Kedu ihe onye na-acha anụnụ anụnụ chọrọ site na nzọ ụkwụ? Ha chọrọ idobe ọsọ ha.
Mụta otu esi agba ọsọ na ọsọ. Mụta otu esi awụlikwa elu na obere nsonazụ. Na mgbakwunye, ha chọrọ nzọ ụkwụ na-agba ọsọ na njem dị larịị.
Nke ahụ bụ ihe acha anụnụ anụnụ na-acha. Ezigbo na mmụta, ndị a bụ igodo mmụta mmụta na igwe kwụ otu ebe. Aga m na-agbada ebe a, ọ bụ obere cheesy. (Joy music) (taya na-akpụgharị n'ala) Ọ dị mma, nke ahụ bụ ihe ụzọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ nwere.
Greatzọ dị mma iji mụta nkà gị. Hokwanye ikike ndị ahụ tupu ibanye na miri miri ma na-akụda uhie ma ọ bụ na-acha oji ị nweghị aka nka ugbu a ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụghị acha anụnụ anụnụ ma ị bụ ọbara ọbara, oh, ụzọ uhie, ee ihe uhie ugbu a Ilzọ ụkwụ dị na ihe nka ị ga - eme bụ uhie, ka anyị chọpụta. (Taya na-agbapu ala) (egwu obi uto) (taya na-agbapu ala) Whoa, ụzọ ụkwụ uhie, gịnị bụ ụzọ uhie ugbu a? Ọ dịkwa mkpa ka ị mụta ịhazi ijeụkwụ gị.
Maka na mgbochi ndị ahụ na-akawanye ibu. Ma eleghi anya ihe niile nwere ike ịdaba na eriri uhie, mana enwere ụfọdụ ebe ị ga-awụlikwa elu ma ọ bụ na ị gafere ihe ọ bụla nwere ịme oghere iji banye n'akụkụ ọzọ iji jikọọ ụzọ ahụ. Enwere obere dobe, enwere ụfọdụ ubi mgbọrọgwụ, ọ dị ntakịrị nke nnyapade Anyị na-agafe ngwa ngwa ngalaba ndị a niile.
ngwaahịa ịgba ígwè
Enwere ụfọdụ okpokoro okpokoro n'elu ụzọ a. Ihe niile nwere ike ịghagharị, mana enwere nnukwu mmali. Ya mere na ị chọrọ ịbụ mara mma ngwa ngwa iji merie ndị a jumps nakwa.
Ugbu a mgbe ọ ruru ya. Nhọrọ igwe kwụ otu ebe, nke ọma, ụdị nke hardtail dị ọnụ ala karịa ga-agba mbọ ntakịrị. Ma igwe kwụ otu ebe ọ bụla nwere ike ime ya, ịkwesighi igwe kwụ otu ebe dị ka nke a.
Nkwụsịtụ zuru ezu na 150 mm nke njem. A hardtail nwere ike ime ya, hey m mere nke a na obe igwe kwụ otu ebe. Yabụ na ọ nwere ike, ịnwere ike ịme ya n'ụgbọ ụkwụ ọ bụla.
Ma igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala karịa nke ị maara nwere ike ịnwe obere nsogbu ịnya ụzọ na-acha uhie uhie, ịnwere ike ịga n'okporo ụzọ ahụ tupu ịwụnye ebe enwere ike ịnwe ihe mgbochi ebe ahụ nke nwere ike iju gị anya. Youchọghị ihe ọghọm na ịgba ọsọ mbụ gị n’okporo ụzọ uhie; mgbe ọ na-abịa ụfọdụ n’ime ndị a jupụta n’elu ụzọ ụkwụ na-acha uhie uhie, ha dị ntakịrị. Ha buru ibu karịa mgbe ị batara na ọsọ ụfọdụ ọ na-adị mfe ịfefe ihe ntụchi.
Ikwesiri igbanwe ngwa ngwa iji mejuputa oghere ndia. Dị ka tabletops ndị a, ha buru ibu na nka gị ga-atụkwasị obi mgbe ị na-achọgharị n'okporo ụzọ uhie. Yabụ ị chere na ị bụ onye ọkwọ ụgbọala na-acha uhie uhie? Must ga-enwerịrị ikike ịkpa ike ịgba ọsọ siri ike.
Chọrọ ịma aka gị, ị dị njikere maka ọdịiche jupụta na ọdịda. Chọrọ iru gị teknuzu njikwa njikwa, nke ahụ bụ ihe ọ ga - ewe iji bụrụ onye na - acha uhie uhie. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Ya mere nke ahụ bụ egwu na-acha ọbara ọbara, ugbu a, ọ nwere ọtụtụ nmali elu nke ị ga-ekpochapụ n'oge ụfọdụ ma ị ga-enwe obere ọsọ ọsọ, yabụ ịchọrọ ya niile, mana anyị enweghị ike ịchịkwa, ( snap mkpịsị aka) ee, ụzọ ojii, anyị enweghị ike ịchịkwa nke a.
Ọfọn onye a bụ maka ọkwọ ụgbọ ala kachasị elu. N'ihi na ụzọ ahụ dị oke egwu, ọ siri ike, ọ dị elu. Enwere ike ịnwe nnukwu, nnukwu mmali na ihe a.
Ugbu a, ị ga-enweta nkà niile ị nwere n'ime igbe gị wee tinye igwe kwụ otu ebe gị ka ị gbaa ịnyịnya egwu dị ka nke a, gbakwunyere ọbụna aha ndị gbajiri agbaji na oji, lee nke a, nye ha ọdụm, nke a bụ ntụpọ atọ, na akụ ojii, ihe mgbochi ị nwere ike iru na igwe kwụ otu ebe nke ị na-enweghị ike ịgbagharị. O bidola obere ugbua, ịma aka, ị nwere ike itughari ya? Echeghị m otu ahụ, echere m na ị nwere ike ịnwụ ma nwekwaa ike imebi igwe kwụ otu ebe gị. Have ga-awụli elu ya, dobe nka na-abanye.
Oh, oh mba, ọ bụ ọkụ ọ dịghị, ọbụnadị tụgharịa. Ọ dị mma, agbaala m n'okporo ụzọ a tupu ị mee ihe n'eziokwu, agbabara m ụzọ ahụ tupu m gbagoro ya na nke mbụ. Naanị ịhụ ihe dị ebe ahụ ka ụfọdụ obere obere nzuzu juru m anya dị ka nke a.
Nke a nwere ike ime ka ụjọ jide gị, tinye gị n'ọnọdụ dị egwu. Yabụ nke kacha mma? bụ ịga ije n'ụzọ tupu ị banye. Karịsịa ụzọ ojii n'ihi na ha nwetụrụ ntakịrị.
Ngwanu, lee ihe a, nke a bụ ụzọ ojii ugbu a. Akpọrọ m nke a mgbọrọgwụ ojii nke mgbọrọgwụ ojii beec Ause, ndị a jọgburu onwe ha. Mgbe ndị a na-amị amị m na-akpọ ha mgbọrọgwụ sinipa, ha jọgburu onwe ha na obere obere oghere ndị a nwere ike ịmịchasị ma nweta ụkwụ ihu gị na ntakịrị ọgba aghara ma gbụọ gị ọnụ ụlọ mmanya na nkà iji gafee ihe a niile na nke a bụ nanị mmalite nke nzọ ụkwụ ahụ.
Ka ị na-agbadata, na steepụ ya, ọ na-akawanye njọ ọ na-aghọ manic ojii. (Obi ụtọ na-ada ụda) Oof, onyea, ị naghị eme nke ahụ ugbu a, eeee, biko. Chọghị ịtụgharị ihe a.
Nke ahụ bụ ihe ojii, ee e, nke a bụ ebe ị ga-achọ ka idobe aka gị. Na ị na-akwụsịtụ nkà gị, ị ga-enwe obi ike na ọsọ gị n'ihi na ọ nweghị ụzọ ọ bụla. Are nọ n'ime, ị nọ, ị ga-enweta ịnyagharị (iku ume nke ukwuu) Ọsọ ojii, enwere ihe gbasara oji nke na-eme gị ụjọ.
The irighiri akwara igba, ma ebe a i nwere iji nweta niile nke nkà na ị mụtara n'oge gị biking gbadata a nwa ụzọ. N'ihi na enwere ike ịgba ya, ọ nwere ike ịdị larịị, ọ nwere ike ịbụ ọsọ ọsọ, ike ike, nnukwu tụlee, nnukwu jumps, ihe ọ bụla dị n'okporo ụzọ ojii a ga-eme ka ị mata ihe ị ga-atụ anya ya nwere ike ịba gị na Butt bite. Mana dịka m kwuru, ụfọdụ ogige ndị na-agba igwe anaghị etinye n'okporo ụzọ ojii na ihe dị otu a.
O nwere ike ịbụ ogologo oge n'ihi ya ọ ga-ewe gị nke ukwuu ọtụtụ ụbọchị niile. Ma a ga-enwe ụfọdụ nrịgo siri ike. Nke a nwere ike ịbụ ọpụpụ ojii, cheta ebe ọ bụla ị nọ, gaa n'ụzọ a.
Enwere ike ịgbaji ya, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọ elu na-acha anụnụ anụnụ ị chọghị ịbanye. (Egwu na-ada ụda) Woo, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, ma ọ bụ ụzọ ojii. Thezọ niile dị iche iche ị maara, ị ga-achọ nkà dị iche iche iji gafere nke ọ bụla.
Ma anyị ga-amalite na-acha anụnụ anụnụ. Onye ọ bụla nwere ike ịnyagharị na-acha anụnụ anụnụ, mana ọ bụ nnukwu ikpo okwu iji melite nkà gị. Ugbu a, ndị a nkà na-adị mfe nyefee ndị red.
Ihe ị ga - eme bụ na ị na - awụli elu ị na - aga ije inga ntakịrị ọsọ ọsọ ma ị ga - enwekwu obi ike ka ị na - anya uhie iji wuo onwe gị rue oji. Mgbe ị na-anya onye ojii, ị nọ na elu ya. Ọ dị m ka mgbe ị jiri oji na nkasi obi na nchekwa, echere m na ị bụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala.
Ugbu a, enwere olile anya na edemede a enyerela gị aka ịghọta ụdị ọkwa nka ị nọ. Ọ bụrụ na ị gara ojii na igwe kwụ otu ebe dị ka nke a. Na ngalaba nke dị n’okpuru, mee ka anyị mata nke ị chọrọ ịbụ, ịnwe ọ exercụ ma ọ bụ nke ị hụrụ n’anya n’ezie? Ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru.
Echefula izute ụwa ịdenye aha n'ihi na ị na-efu ụfọdụ ọdịnaya epic. Nke anyị na-ewepụta kwa ụbọchị n’izu, ụbọchị 365 n’afọ. Ugbu a ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrapara ma lelee edemede ọzọ, edemede a ga - eme n’ọrụ ọzọ.
Pịa ebe a, ọtụtụ ịmegharị ihie ụzọ n'ihi na enwere ole na ole n'ebe ahụ. Echefula inye anyị mkpịsị aka iji nye, likeand see you next, see you next! Ah, a ga m eri nri ehihie, ọ bụ obere ịnyịnya ibu nke ukwuu. (Taya na-awagharị n’ala niile) Ehee, lee anya n’oge na-adịghị anya.
Kedu ka esi etinye ụzọ ụkwụ MTB?
Ilszọ ụkwụdịgosiridị ka obosara, elu, nkezi grajentị, kacha grajentị, eke mgbochi na teknuzu atụmatụ. Anọ ndị a dị mfe, etiti, ihe isi ike na ọkachamara. Mfeụzọ ụkwụndị kacha adabara ezinụlọ na ndị na-agba ịnyịnya ígwè novice nwere ịnyagharị igwe kwụ otu ebe.
Kedu ihe bụ okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe?
Usoro ụzọ etitina-enye ndị na-agba ịnyịnya ahụ nkà ha nwere ọganihu karịa ọkwa mmalite.Usoro ụzọ etitiga na-enyekarị ihe mgbochi a na-apụghị izere ezere buru ibu karịa nke a na-ahụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụụzọ ụkwụ- ihe ngosi di iche iche dika mgbọrọgwụ, okwute, na nkpuru-osisi nke ruru aka 8-inch.
Kedu ihe odo odo pụtara na Trailforks?
Pọpụl- ụzọ ọkụ. Green - mbido mfe. Blue - Agbata.2 jan. Ọkt 2018
Kedu otu MTB siri sie ike?
Ugwu igweụzọ ụkwụ na-enwekarị ugwu dị elu ma gbagoo, ebe ụzọ na-araparakarị nwayọ na akara ugo mmụta. Agbanyeghị, okporo ụzọ nwere ike ịnwe akara ule dị larịị ma tụgharịa ngwa ngwa, dịka ọ dịigwe kwụ otu ebeụzọ ụkwụ nwere ike ịdị mbadamba. A ụzọ ịnyịnya na ugwu bụ ihe ndị ọzọsiri ikekarịa aMTBnọo n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè.Jul 19 2016 Nọvemba
Kedu ihe na-eme ogologo igwe ojii igwe ojii?
Nke di eluụzọ ụkwụna-enye nsogbu ndị ahụ na-agba ịnyịnya bụ ndị nkà ha nwere ọganihu karịa ọkwa dị n'etiti. Dị otú ahụụzọ ụkwụna-Elezie ẹkedọhọde na signage agba aoji ojidị ka e gosiri na chaatị dị n'elu.20 nke 20 Ọkt 2018
Kedu ihe agba ndị ahụ pụtara na ndụdụ ụkwụ?
Maapụ ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ maka igosipụtaụzọ ụkwụ, ndabara bụ sitenzọ ụkwụihe isi ikeagba. Otu n'ime nhọrọ bụ 'ewu ewu', nkega-agbaiheụzọ ụkwụdabere na aagbaokpomoku. Ebe dị iche iche bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha ọbara ọbara. Green ịbụ ndị kasị ala riddennzọ ụkwụ, acha uhie uhie kacha.
Kedu otu ị ga - esi họrọ mpaghara n'efu na Trailforks?
ọ bụghị makan'efuọrụ nkeIlzọ ụkwụngwa nweta 1free ebe. Nke an'efubusetna-akpaghị aka maka gị dabere na ọnọdụ gị ugbu a. Ma a na-ahapụ gị ka ị gbanwee otu mgbe ahụ ka ọ bụla ịchọrọ. Can nwere ike ma pịa 'DezieMpaghara Free'ederede na ala aka nri nkefree ebeigbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na maapụ.
MTB ọ siri ike karịa ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ?
.B.Siri nnukwu ikerụpụta
Ọ bụghị naanị na ị na-agba ịnyịnya dị mma mana ị na-eji ụdị anụ ahụ ọzọkarịankịtị ogologon'okporo ụzọ ịgba ígwèụbọchị. Naọgba tum tumenwere ihe mgbochi ndi choro ma okpukpu, mgbawa nke ike naanyịnya igwena-adịkarị arọ, nke, n'ozuzu na-eme ka a ukwuuSiri nnukwu ikerụpụta.bọchị 2020
Ọ dị mma ịgba ịnyịnya igwe n'okporo ụzọ?
Kedu ihe ịrịba ama dị na ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe?
Ọtụtụ sistemụ nzọ ụkwụ na-eji akara akara nwere otu akara nke ebe ski na-adabere iji gosipụta nsogbu: okirikiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ụzọ ụzọ mbido enyi, oghere ndị na-acha anụnụ anụnụ maka ụzọ dị mma maka ndị na-agba n'etiti, na oji (ma ọ bụ, gulp, ojii abụọ) maka ọkachamara- naanị nhọrọ.
Ebee ka akara MTB dị na Missouri?
Signszọ akara na Glentress, akụkụ nke usoro ụzọ nzọ ụkwụ sara mbara na Glentress, otu n'ime Commissionlọ Ọrụ Na-ahụ Maka bikgba Egwuregwu Ugwu na Ala. Travis Feller bụ onye ọsụ ụzọ n'ịmepụta otu ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na Missouri.
Kedu ụkpụrụ ụkpụrụ maka ịgba ịnyịnya ugwu?
Lee nkọwa. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-aga n'okporo ụzọ nke ndị njem na-eme njem, ndị na-agba ịnyịnya na ndị ọzọ nwere mmasị n'èzí. Kemgbe afọ 1988, ndị International Mountain Bicycling Association (IMBA) enyela iwu nke nzọ ụkwụ iji kwalite ezigbo ọrụ na omume ọma na ụzọ eji eme ihe na iji nyere onye ọ bụla nwere ahụmịhe na-atọ ụtọ.